Kuenda muStrasbourg By Train | Save A Train
musha > Travel Europe > Kuenda muStrasbourg By Train
Kana mufambi anotaura kushanyira France, vanhu vakawanda wakaramba pakarepo kufunga Paris. zvisinei, France kuti guta handiyo chete guta unokosha kushanyira munyika ino yakanaka, Kuenda muStrasbourg ndiye IN itsva. dzimwe nzvimbo dzakawanda vakaita vakakodzera kuonga zvose naka zvinotyisa uye zvakaitika zvavangapa.
Strasbourg ndomumwe wevaya maguta kuti taikwanisa kuyemura, zvose norunako rwaro zvakawanda zvinhu ikoko. Kuenda nechitima muStrasbourg kubva kumaguta makuru European kuenda kunotora mweya wenyu. Ngatidyei vanyatsoona kuti unogona kuenda ichi naka rwendo uye chii unokwanisa kuona uye ikoko:
Kana Kuenda Strasbourg Visit The Strasbourg Cathedral
Machechi kubva Ages nguva vari enchanting, zvinotyisa, uye kungoshamisira kuongorora. uye Strasbourg Church rinomira akareba pakati pavo - sezvariri, sezvo richishandiswa kuva chirefu kupfuura chivako munyika kusvikira 1874! Vamwe zvikamu izvozvo zuva kare 1100, inova testamendi yechokwadi rini mamiriro ichi kare rave rimire. Ungave sarudza kuongorora mukati kana kuramba kuchengeta France, iwe uchazova mwoyo.
Tora Pictures Of La Petite France
Rakasungwa La Petite France anonzwa kuda kufanana kudzokera munguva. With zvivako sokunofadza matema uye chena hafu-nematanda ukapisa murwi muruwa aigara kuva vatengesi ose, cobblestone migwagwa, uye zvetsika mumaresitorendi, zviri nzvimbo unofanira kuwana. kutora mifananidzo uye fungidzira pachako munguva refu yakapfuura.
MuMarseilles kuna muStrasbourg Zvitima
Lyon kuna muStrasbourg Zvitima
Kuzvifananidza The Local Cuisine
For chikafu vashanyi, pane inokosha gastronomical vaitire kuti vakatora kana Kuenda muStrasbourg: Alsatian chikafu, uye asina waini uye doro. Strasbourg anotonga pamusoro nharaunda yeAlsace nharaunda, apo waini vari kunyanya varietal, uye huru mbiri kuedza zviri Gewürtztraminer uye Riesling. Peya zvapedzisira pamwe pani-Fried kabhu kana Choucroute garnie, inozivikanwa Alsatian Classics, uye ndinofarira mukanwa yako.
KuCologne muStrasbourg Zvitima
Lille kuna muStrasbourg Zvitima
Zurich kuna muStrasbourg Zvitima
Metz kuna muStrasbourg Zvitima
Tora A Boat Trip Around muStrasbourg
Imwe nzira yakanaka kwazvo kuongorora Strasbourg riri Via muigwa kukwira. Chinhu mukana wakanaka kuona dzimwe muguta racho kwazvo yakanaka zvinotyisa uye kudzidza pamusoro hwarwo panguva imwe chete. Pane yakawanda chikepe tasva nzira kusarudza kubva, uye unogona kuwana vaviri pfungwa izvo hotspot kushanyira inotevera.
Strasbourg ane chechipiri pakukura chiteshi chechitima muFrance, zvakanaka pashure Paris. Kusvika nayo nechitima achiri zvakarurama, uye une mukana achitora soro-nokukurumidza chitima TGV (high speed chitima) Zvinogona kutora iwe kubva Paris kuna muStrasbourg mu chete 2 maawa uye 20 maminitsi, panzvimbo dzose 4 maawa nemotokari.
Izvozvo zvinoreva kuti kufamba nguva kubva mamwe maguta makuru European zvakare chaizvo mapfupi. Kana uri parwendo kuenda muStrasbourg kubva Siwizarendi, Bherujiyamu, Netharenzi, Jerimani, uye dzimwe nyika dzokuEurope uye maguta, unogona kusvika muStrasbourg nyore uye nokukurumidza. Tsvaga usiku kwokubatana kana uri munhu tighter bhajeti nekuti matikiti aya kazhinji isingadhuri.
Ready kuti nguva hwako ichitsvaka inofadza guta muStrasbourg? Bhuku rako chitima matikiti ikozvino, uye nakidzwa zvose rwendo uye rwendo.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine Link kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-strasbourg-train%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml uye iwe unogona kushandura / kana / nayo uye mimwe mitauro / of kune nl.